မျက်စိဓာတ်ခွဲခန်း Technician ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့လုပ်ငန်းများ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / မျက်စိဓာတ်ခွဲခန်း Technician ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့လုပ်ငန်းများ
မျက်စိဓာတ်ခွဲခန်း Technician ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့လုပ်ငန်းများ
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized မှတ်ချက် Leave 442 views
အချပ်, အလုပ်, နှင့်တောက်ပြောင်မျက်မှန်, မျက်ကပ်မှန်, သို့မဟုတ်အခြားတိကျသောဖိုင်ဘာဆက်ကြောင်းအစိတ်အပိုင်းများ. အပိုဆောင်းဖြစ်ကြောင်းမျက်စိဖြစ်ကြောင်းအဆောက်အဦများသို့မဟုတ်ချဉ်းကပ်မှုရှုထောင့်သို့အဆက်အသွယ်ဆောက်လုပ်ရန်နှင့် install. စုံလင်ခြင်းမှန်ဘီလူးပိုလန်တို့ပါဝင်သည် Center, သို့မဟုတ် grinders – edgers.
ကပ်, လုံခြုံစိတ်ချ, and align done contacts in units that were eye or frames, applying accurate hand-tools.
Attach and protected lens blanks or eye lens in possessing tools of covering devices, or slicing, ချော, mincing.
မျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောဘောင်တည်ဆောက်ရန်နှင့်နဖူး-bits add, နှာခေါင်း-pads, နှင့်မျက်မှန်, လေ့ကျင့်ခန်းကို အသုံးပြု., ဝက်အူလှည့်, နှင့်သံနှုတ်.
မှန်ဘီလူးပေါ်ဖုံးအုပ်၏အထူသေချာ, ကြမ်းပြင်ချောမွေ့အတည်ပြု, နှင့်အပြစ်အနာအဆာကိုသိရှိနိုင်ဖို့အဆက်အသွယ်ကွက်လပ်စစ်ဆေး.
အဆက်အသွယ် tools တွေကို Pick, မှို, ကွက်လပ်, နှင့်ဘီးသွေးသို့မဟုတ်ကြိတ်, ဖန်ဆင်းခြင်းလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီ.
ဖြေရှင်းချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, တောင်းဆိုမှုများလုပ်ဆောင်, သို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်မှန်ဘီလူးမျက်ကပ်မှန်နှင့် ပတ်သက်. ကျန်တာတွေဆုံးဖြတ်ရန်ခွက်အက်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသော, သို့မဟုတ်အခြားသောအမြင်အာရုံရှုထောင့် element တွေ.
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု Set များနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူတို့ကိုဖုံးကွယ်ဖို့လိမ်ဖြစ်ကြောင်းဘီးဆန့်ကျင်မှန်ဘီလူးသို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်မှန်ဘီလူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စက်ကိုစတင်ရန်.
နေရာအရပ်နယ်နိမိတ်အတွက်ထား, တောက်ပဖို့, ဘီဗဲလ်, သို့မဟုတ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မျက်ကပ်မှန်, inshore, ကွက်လပ်.
ပြုပြင်ရေးပျက်စီးအပိုင်းပိုင်း, ဂဟေသံနှင့်တိကျမှန်ကန် handtools သုံးပြီး.
အရွယ်အစားကိရိယာများကိုလျှော့ချအခြေအနေနှင့်ချိန်ညှိ, ရှေးခယျြသောအဖြစ်များတတ်သည်, နှင့်အချပ်၏အသေးစိတ်.
စစ်ဆေးခြင်း, ထည့်သွင်းစဉ်းစား, နှင့်တိကျမှန်ကန်ရေးကိရိယာများကို အသုံးပြု. ထိန်းလိုက်နာအပ်သောနှင့် positioning ကိုအတည်ပြုပေးရန်ပြီးစီးပြီးနောက်တပ်ဆင်ထားသို့မဟုတ်အားအထိုင်မှဖြုတ်မှန်ဘီလူးအကဲဖြတ်ရန်.
သိုလှောင်မှုပမာဏသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပြေးနှင့် ပတ်သက်. သေတ္တာကလေးအတွက်အနာနှင့်သီးခြားမှန်ဘီလူးမှဖယ်ရှားရန်.
မျက်ကပ်မှန်ကိုထုတ် တင်. themes များ အသုံးပြု. အဆက်အသွယ် collection များကိုခြေရာကောက်.
ခိုင်မာမှမျက်မှန် Case နှစ်, သက်သာစေနိုင်ကြောင်း, သို့မဟုတ်ဆိုးဆေး.
အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သောစာရွက်စာတမ်းများအတွက်အသိပညာ-နားလညျမှုလိုင်းများနှင့် created စာကြောင်း Reading.
အခြားလူများလက်ရှိပြောနေကြသည်အရာကိုတစ်ခုလုံးကိုအာရုံကို active-နားထောင်ခြင်း-ကမ်းလှမ်း, သငျသညျကိုထုတ်လုပ်လျက်ရှိအသေးစိတ်နားလည်ရန်အချိန်လေးလည်း, သင့်လျော်သောအဖြစ်တောင်းခံမေးမြန်းချက်, နှင့်လက်မခံနိုင်အခါသမယမှာလမ်းပြနေဘယ်တော့မှ.
နည်းလမ်းများ-ရွေးချယ်ခြင်းသင်ယူခြင်းနှင့်ထိုပြဿနာကိုပညာပေးသို့မဟုတ်အသစ်ကိစ္စများကျွမ်းကျင်လာသောအခါတငျပွ instructionPERinstructional မဟာဗျူဟာများနှင့်နည်းလမ်းများကိုအသုံးချပြီး.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏ခြေရာကောက်-TrackingPEREvaluating ထိရောက်မှု, ကွဲပြားခြားနားသောတစ်ဦးချင်းစီ, သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသည်တိုးမြှင့်မှုများ generate သို့မဟုတ်ကုစားအရေးယူစဉ်းစားရန်.
လူမှုရေးအမြင်-သိ othersA သူတို့လုပ်ပေးနေချိန်မှာသူတို့ reply ဘယ်ကြောင့်တုံ့ပြန်မှုနှင့်နားလည်မှု.
အရှေ့တိုင်းဆန်-positive ကလူကို enable မဟာဗျူဟာများရှာကြံန်ဆောင်မှုများ.
အဆင့်မြင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း-ဖော်ထုတ်ခြင်းရှုပ်ထွေးသောပြဿနာများနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေဆန်းစစ်နဲ့ options လျှောက်ထားရန်သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်သုတေသနပြု.
တစ်ဦး layout ကိုအောင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားသုံးသပ်ခြင်း-စစ်ဆေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ဖြေရှင်းချက်လိုအပ်ချက်.
နည်းပညာဒီဇိုင်း-အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ထူထောင်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် Generating လိုအပ်ချက်များကိုအစေခံရန်.
Tools များရွေးချယ်ရေး-ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း execute ဖို့လိုအပျ tools များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏မျိုး.
အရစ်ကျ-Installing packages များ, မော်ဒယ်များ, ဝါယာကြိုးများ, လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများ.
မြောက်မြားစွာအသုံးပြုမှုများအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေး-Creating ကွန်ပျူတာ applications များ.
function ခြေရာကောက်-လေ့လာခြင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, စံအတိုင်းအတာ, သို့မဟုတ်အခြားအညွှန်းကိန်းထိထိရောက်ရောက်လည်ပတ်နေတဲ့စက်လည်းမရှိကြောင်းသေချာစေရန်.
ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အခါအဆုံးအဖြတ်သည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု၏အဘယ်အရာကို type ကိုလိုအပ်သောဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုကို Maintenance-ဖျော်ဖြေဝန်ဆောင်မှုအ.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးကုန်စည်စာမေးပွဲ-Completing စာမေးပွဲနှင့်အကဲဖြတ်, န်ဆောင်မှုများ, သို့မဟုတ်စစ်ဆင်ရေးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သို့မဟုတ်ထိရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်မှ.
systems တစ်ဦး technique ကိုလုပ်ဆောင်ရမယ်ဘယ်လိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ-ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ပဲဘယ်လိုဝေဒနာတွေမြားတှငျပွောငျးလဲ, လုပ်ငန်းဆောင်တာ, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူဆိုးကျိုးများကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်.
systems အကဲဖြတ်-ခွဲခြားလုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်အချက်ပြမှုများစနစ်ကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လည်းခြေလှမ်းတစ်ခုမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသို့မဟုတ်တိကျသောစွမ်းဆောင်ရည်ခဲ့, စက်ပစ္စည်း၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီ.
ဘဏ္ဍာရေးဝင်ငွေမကြာမီအလုပ်အမှုကိုပြုရရင်းနှီးမြှပ်နှံပါလိမ့်မည်ဘယ်လောက်အရင်းအမြစ်-ဆုံးဖြတ်၏စီမံခန့်ခွဲမှု, ဤအသုံးစရိတ်များနှင့် ပတ်သက်. အရောင်း.
ကုန်ပစ္စည်းနည်းလမ်းများ-လက်ခံခြင်းထုတ်ကုန်များ၏မှန်ကန်သောအသုံးပြုမှုနှင့်စောင့်ကြည့်၏အုပ်ချုပ်ရေး, သာယာအဆင်ပြေမှုများ, နှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ function ကိုမရွေးပါဘူးဖို့လိုအပျ.
ဝန်ထမ်းရေးရာအရင်းအမြစ်များ-တည်ထောင်ရန်၏ကြီးကြပ်မှု, တွန်းအားပေး, သူတို့အလုပ်လုပ်အဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်များ directing, သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အများအတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားသွား.
high-ကျောင်းအဆင့် (GED သို့မဟုတ်အကြီးတန်းကျောင်းနှင့်ညီမျှလက်မှတ်သို့မဟုတ်)
ထက်ပိုပြီး 1 နှစ်, မှတက်နှင့်အနှစ်စုံတွဲတစ်တွဲအပါအဝင်
ဇှဲကောငျးခွငျး – 89.46%
ထိန်းချုပ်ရေး – 78.88%
ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး – 89.60%
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. ပြဿနာ – 89.22%
လူမှုအရှေ့တိုင်းဆန် – 85.24%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 88.26%
ဖိအား Threshold – 90.22%
adapter / Mobility ကို – 89.95%
တည်ငြိမ်ခြင်း – 92.16%
အနက်မှအာရုံစူးစိုက်မှု – 94.72%
ကျင့်ဝတ် – 86.14%
လွတ်လပ်ခြင်း – 81.89%
တီထွင်မှု – 81.03%
analytical အတွေးအခေါ် – 82.73%